musqusha Guud: iman kara waa rajo
Iyada oo si weynna u kobcay dhaqaalaha Shiinaha iyo ballaarinta dalabka suuqa, noocyada iib ah caafi-shisheeye ayaa sidoo kale soo galay suuqa gudaha, oo ay qarka u saaran inay suuqa-dhamaadka sare ee guriga. In wajiga of tartan dibedda ah, shirkadaha iib ah caafi Shiinaha ayaa u leeyihiin in ay helaan hab kale si ay u bilaabaan ka fekerka ku saabsan sida si ay u abuuraan hab baxay.
U kaca ee noocyada iib ah caafi-shisheeye duuleen magac qaran
Wajahay xiisadda by tartan ee jirta noocyada iib ah caafi-shisheeye keenay, ee magac iib ah caafi-caalamiga ah ee magaalooyinka heerka koowaad ee Shiinaha bilaabay inaan dareemo Nidhi Naaray u soo jeestay suuqyada heerka seddexaad ee labaad oo ay fiiro. Waxaa intaa dheer, waxay si dhakhso ah ayaa bilaabay in ay habeeyaan dhiganta xeeladaha suuq-geynta iyo iibka si loo hubiyo in suuqa-line marka hore ma lumin, halka balaadhinta saamiga suuqa ee suuqyada heerka seddexaad ee labaad iyo.
Si kastaba ha ahaatee, siyaasadaha xeerka iyo xakameynta suuqa hantida maguurtada Shiinaha ayaa keentay in hoos u dhac joogto ah-dhamaadka sare hantida maguurtada ah sida filooyin, iyo la'aanta ah ee iibka ah ee-dhamaadka sare guryaha ganacsiga ee magaalooyinka koowaad iyo heerka labaad ee, sidaas jiidayeen hoos-dhamaadka sare suuqa iib ah nadaafada iyo in ay idiinkala hadhin keenaya. Waqtigan xaadirka ah, magac fiican u yaqaan gudaha horumar guriga ay qabteen suuqa iib ah caafi-dhamaadka sare ah, taas oo uu leeyahay saameyn weyn ku magac caalamiga iib ah caafi.
Isla mar ahaantaana, horumarinta deg deg ah ee warshadaha Shiinaha ee iib ah nadaafada, waxaa jiray noocyada qoyska caan ah sida Wrigley iyo Jiu Mu. Qaar badan oo hoteelada iyo hotels-dhamaadka sare ayaa bilaabay inay ku tuuraan hydrangea in noocyada guriga la tayo sare leh oo qiimo yar yahay. U kaca ee wata magac qaran ayaa dhacay meel ku soo jireenka ah ee wata magac caalamiga iib ah caafi.
waqti Post: Jan-18-2019